एकमुखे रुद्राक्ष र हनुमाने सिक्का बारे रोचक जानकरी – live 60media
एकमुखे रुद्राक्ष र हनुमाने सिक्का बारे रोचक जानकरी
एजेन्सी, हजुरलाई थाहा छ ? एक मुखे रद्राक्ष को दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ । यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ ।
विश्वासीहरूका अनुसार, यसलाई धारण गरे सुखशान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य र बुद्धि मिल्छ । चरक संहितामा पनि यसबारे उल्लेख छ, औषधीका रूपमा । सिद्धियोग परेको बिहीबारका दिन आकाशबाट परेको पानी रुद्राक्षको फूलमा परी तत्काल बन्द हुँदा त्यसबाट एकमुखे रुद्राक्ष फल्न सक्छ भन्ने पनि शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा उल्लेख छ । लोकश्रुति अनुसार, एउटा बोटमा यस्तो रुद्राक्ष १२ वर्षमा तीनवटा मात्र फल्छन् । जसमध्ये एउटा आकाश र अर्को पातालमा जान्छ भने तेस्रोचाहिँ धर्तीमा रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरे । उनको यो प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लागू गरिसकेकी छिन् । योसँगै नेपाली राजनीतिक बृत्तमा नयाँ तरंग देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै चर्को विरोध भैरहेको छ ।
नेपाली चलचित्रका कलाकारहरुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देश अस्थिरतातर्फ प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन् । संसद विघटनको खबर सार्वजनिक भएसँगै कलाकार दीपकराज गिरीले दुई तिहाइको सरकार पनि दुई तुहाई भो भनेर उल्लेख गरेका थिए । उनले, ५ बर्षे सरकार नदेखि मरिएला जस्तो छ भनेर सामाजिक संजालमा स्टाटस लेखेका थिए ।
नेताहरुलाई धिक्कार छः हरिवंश
हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यले नेताहरुलाई धिक्कारक छ भनेका छन् । उनले भने–‘यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक भाइरस हो । यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कदम भयो । यसमा यो नेता र त्यो नेता भन्ने नै छैन । सबै नेताहरु खराब ब्याक्टेरिया हुन् । जसले जनताको हितका लागि केही पनि सोचेनन् ।’
हरिवंशले निर्वाचनमा भोट नहाल्दा प्रजातान्त्रिक पद्धती नै विग्रने भन्दै तर भोट कसलाई हाल्ने भनेर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने–‘सबै नेताहरु उस्तै छन् । भोट कसलाई हाल्ने ? यी नेताहरुको साटोमा अर्को तानाशाहा जन्माउनु भनेको देशका लागि झनै घातक हुनसक्छ । यसैले, प्रजातान्त्रिक पद्धती विश्वमै सबैभन्दा उत्तम हो । तर, नेता खराब पर्दा जनताले दुख पाए ।’
कहाँ छ देश प्रेमः करिश्मा मानन्धर
नायिका करिश्मा मानन्धरले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि प्रतिक्रिया दिदै कहाँ छ देश प्रेम भनेर उल्लेख गरेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्–‘कठै नेपाली जनता आफूलाई सबै खाले ज्ञान हुँदाहुँदै पनि सत्ता मोहमा लिप्त भएर जुन हदमा पनि जान सक्नेहरुको तमासा हेरेर बस्न वाध्य छौ ।
यहाँ कहाँ छ देश प्रेम ? कहाँ छ जनताको भावनाको कदर ? कहाँ छ उनीहरु आफैले गरेको प्रतिवद्धता ?’ करिश्माले जनताको भावनाको कदर नभएको र नेताहरुले आफैले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । नेपाली चलचित्रका कलाकारहरुले यो बिषयमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
नायक रमेश उप्रेतीले नेपालमा अबको ३० बर्षसम्म जहानिया साशन लागू हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । दर्शकले दिएको म्यान्डेटलाई बहुमत प्राप्त सरकारले लत्ताएको भन्दै उनले ३० बर्ष जहानिया साशन लागू हुनुपर्ने भन्दै राजतन्त्रको आवश्यकता रहेको तर्फ संकेत गरेका छन् ।
यस्तै गायक प्रमोद खरेलले पनि ३६ लाख ६३ बनाउन खोजेर कहाँ हुन्छ त भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले गणतन्त्रमा पनि जनता दास भैराख्ने र आफ्नाले जे गरेपनि जयजय भनिराख्ने ओ भने यस्ता खालका तहस–नहस सहिरहनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
← सियोना श्रेष्ठलाई बचाउन शिशिर भण्डारीले लाखौं सहयोग जम्म गरेर बुझाए । सियोना पक्कै बाँच्नेछिन् (भिडियो हेर्नुस)
झाडीमा ४ जनाले १ घन्टा सम्म दिदिकै अगाडि र’गताम्य हुदा पनि छाडेन पा’पीले, को थिए ति ४ जना हेर्नुहोस ( VIDEO ) →